Shangri-ला को कथा:क्लस्टर Pays एक उत्कृष्ट छ बेलायत स्लट अनलाइन खेल नेट मनोरंजन विकास. यो एक6रील र5डेस्कटप उपलब्ध छ जो पङ्क्तिहरू स्लट, मोबाइल र ट्याब्लेट उपकरणहरूमा. यो बेलायत स्लट अनलाइन खेल खेलाडी न्यूनतम को समूह सिर्जना गर्न जो अन्तर्गत चिल्लो गेमप्लेको छ9तेर्सो वा ठाडो सट्टा बायाँ--दाँया payline को देखेको छन् समान प्रतीक. यो अनलाइन स्लट साइट स्लट खेल £ 0.10 को न्यूनतम शर्त र £ 200.00 को अधिकतम शर्त संग प्ले गर्न सकिँदैन.
यो शानदार बेलायत स्लट अनलाइन मा विशाल जीत बाहिर फसाउन प्ले !!
यो बेलायत स्लट अनलाइन खेल प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन द्वारा वर्णन रूपमा मा रहस्यमय हिमालय राज्य थिम्ड गरिएको छ. यो भव्य एनिमेशन र भिजुअल एक fantastically डिजाइन वातावरण विशेषताहरु. यो अनलाइन स्लट साइट खेलाडी को एक विशाल Jackpot कमाउन अनुमति 10,000 आफ्नो खम्बा समयमा. यो RTP छ 96.59%.
यो स्लट समावेश3गुरु प्रतीक जो2स्थितिहरु उच्च- बादर, बिरालो र हात्ती. जबकि अन्य प्रतीक बैजनी Dragonfly रूपमा मान्यता प्राप्त, को आरु रंग फूल, यस सुन जस्तो माछा र हरियो पुतली. पनि, को क्लस्टर सम्भव छ जब जंगली प्रतिमा रूपमा हरियो प्रश्न चिन्ह कार्य र यो शीर्ष भुक्तानी दिने whichever प्रतीक मा परिवर्तन हुनेछ.
आकर्षक बोनस विशेषताहरु खोज्न-
यो प्राप्त गरेर सक्रिय 3, 4,5वा6को स्क्याटर प्रतीक को कहीं पनि रील मा. यी माथि हुनेछ2रील यसरी स्थितिहरू, खेलाडी मात्र यो सक्रिय बनाउन क्रममा दृश्य भित्र आधा प्रतीक चाहनुहुन्छ.
अब, पाँच, छ, सात वा आठ मुक्त spins क्रमशः खेलाडी दिइनेछ. र, दुई र छ जंगली प्रतीक बीच spins को प्रत्येक रील धारण गरिनेछ पछि. यहाँ, पहिलो दुई अंधाधुंध अप राखिएका छन् तर कुनै पनि अतिरिक्त व्यक्तिहरूलाई क्लस्टर अर्को अग्रिम हुनेछ. पनि, खेलाडी प्राप्त हुनेछ 1 थप स्पिन, मामला मा कुल पुरस्कार राशि 10x कुल शर्त भन्दा कम छ.
अनियमित Wilds / Substitutions
यो एक आधार खेलमा न्यूनतम चार समान प्रतीक को न्यूनतम दुई समूहहरु प्राप्त गरेर यस बेलायत स्लट अनलाइन खेल मा ट्रिगर गर्न सकिन्छ र यी समूहहरु एक भुक्तानी लागि सामेल सम्म को wilds को रील गर्न राखिनेछ.
यो बीचमा दुई समान समूहहरु प्राप्त गरेर रूपबाट5र 8 प्रतीक. अब, खेलाडी ठाउँमा आयोजित छन् जो समूहहरु संग मुक्त respin प्राप्त गर्नेछन्. हरेक अतिरिक्त समान प्रतीक अवतरण अन्तिम भुक्तानी सम्म अतिरिक्त स्पिन प्रदान गर्नेछ.
दुई स्क्याटर प्रतीक रील र अर्को मा भूमि जहिले पनि यो हुन सक्छ 1 बस दृश्य बाहिर भूमि. तथापि, कि तेस्रो प्रतीक मुक्त spins सक्रिय दृश्यमा अप Nudged गरिनेछ.
Shangri-ला को कथा:क्लस्टर Pays राम्ररी निर्माण स्लट छ. यसलाई सरल नियमहरू र प्रभावकारी बोनस सुविधाहरू समावेश. यो बेलायत स्लट अनलाइन खेल एक मध्यम भिन्नता छ र यसरी, एक ठूलो जीत हासिल गर्न आशा गर्न सक्छौं.